Fanaanka caanka ah farxaan xidig iyo wafti u hogaaminaayo oo tegay dalka turkiga una tegay arintii Qamar abdillahi Harawo oo ku xidhan dalka turkiga. - Haldoor News | Haldoor News
Fanaanka caanka ah farxaan xidig iyo wafti u hogaaminaayo oo tegay dalka turkiga una tegay arintii Qamar abdillahi Harawo oo ku xidhan dalka turkiga.
Wafti balaadhan oo uu hogaaminaay farxaan xidig oo ay wehelayaan Dr.mahamud omar sheekh,xayaad oo ah gabadh leh urur fanaaniinta somalida ay ku caawiso.
Xayaad waa gabadh caan ah oo urur ku leh dalka suise waxayna wax u qabataa dhamaan fanaaniinta somaliyeed waa gabadhii soo dhoofosay maxamed saleebaan tubeec waa gabadhii soo dhoofisay qamar abdillahi harawo waa gabadh mar walba wax u qabata fananiinta somaliyeed oo aan u eegi degaan ama qolo ama gobol iyi wixii lamid ah .
Xayaad maantana waxay u dhooftay oo ay u tegtay dalka turkiga arinta fanaanada caanka ah ee qamar abdillahi harawo oo mudo farabadan ku xidhan turkiga xayaad waa gabadh dadaal badan ugu jirta siddii loo soo daynlahaa qamar abdillahi harawo.
Farxaan xidig oo wakhti badan ku bixinaaya sidii loo soo dayn lahaa fanaanada qamar harawo ayaa wuxuu u dhoofay oo uu rabaa in la siidaayo fanaanada somaliyeed oo ah gabadh umada somaliyeed aad u jeceshay codkeeda iyo fankeedaba.
Hadaba umada afka somaliga ku hadashaa waxay la yaaban yihiin maxay xukumada somaliyeed ama xukumada somaliland ay uga hadli laayihiin sidii loo soo dayn lahaa qamar abdillahi harawo oo xidhan sanado farabadan.
Gaar ahaan qamar abdillahi harawo waxay u dhalatey somaliland oo ka soo jeedaa ilaa maantana somaliland kamay hadal arintaas waxaan u aragnaa inay xukumada somaliland ay ka gaabisay arinteeda.